မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ- ၂၀၂၀ မေလ ၁၇ ရက်နေ့က ကျန်းမာရေးစစ်ရန် စောင့်နေသူများ (Photo by Sai Aung Main / AFP)
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေကို အစိုးရက ထောက်ပံ့ကြေးပေးတဲ့ အစီအစဉ်အပေါ် မကျေနပ်မှုတွေကို တိုင်ကြားစာပေါင်း ၂ သိန်းကျော် ရှိနေတဲ့အကြောင်း မ အိမ့်သန္တာထွန်းပြောပြမှာပါ။
ကပ်ရောဂါကာလမှာ အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသူ အခြေခံလူတန်းစားတွေကို အစိုးရက ထောက်ပံ့နေတာ အခုဆိုရင် ၄ ကြိမ် ရှိလာပေမဲ့ မကျေနပ်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေဆဲဖြစ်ပြီး တိုင်ကြားစာတွေလည်း အခုဆိုရင် ၂ သိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဝန်ကြီး ဦးမင်းသူက Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာ ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်ကြားစာတွေက ၁သိန်း ၈ သောင်းကျော်ကို စိစစ်ပြီးစီးပွားပြီး၊ အများစုဖြစ်တဲ့ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကတော့ ရသင့်လျက်နဲ့ မရတာကြောင့် တိုင်ကြားသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး၊ ရသင့်သူတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်း ရေးသားထားပါတယ်။
ကပ်ရောဂါ အဆိုးဆုံးကြုံနေရတာကြောင့် အိမ်ပြင်မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းထဲက ထောက်ပံ့ကြေးရရှိဖို့ လျောက်ထားသူ ၃သောင်းလောက်ရှိတဲ့ လှိုင်သာယာ အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာတော့ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေအပြင် ရပ်မိရပ်ဖတွေ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အကူအညီ လိုအပ်နေသူတွေကို စိစစ်နေတယ်လို့ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အနောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးနေမင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
“ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေမှာ အဆောင်တွေက များတယ်ခင်ဗျ။ အဆောင်တွေကများတော့ အဆောင်တစ်ဆောင် တစ်ခန်းမှာ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်လောက် စုပြီးတော့ ငှားနေကြတာတွေရှိပါတယ်။ သူတို့က တစ်ယေောက်ကို အိမ်ထောင်စုတစ်စုဆိုပြီးတော့ လာလျှောက်တာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ပယ်ရပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို ၃ ယောက်ပေါင်းပြီး တစ်စုဆိုပြီးတော့ လာလျှောက်တာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေသည် စက်ရုံလုပ်သားတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပယ်ရတာပါ။အကုန်လုံးကို ကျွန်တော်တို့ မပေးပါဘူး။ သို့သော် အဆောင်မှာနေတယ်၊ မိသားစုတစ်စုတည်းဖြစ်တယ်။ တစ်ယောက်လောက်ပဲ ဝင်ငွေရှိတယ်။ သူဝင်ငွေကို ကျန်တဲ့ ၃ယောက်လောက်က မှီခိုနေရတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က စိစစ်ပြီးတော့ ထည့်သွင်းလျှောက်ထားတဲ့အထဲမှာ နောက်တိုးအနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ပယ်တာကတော့ နည်းပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆို အချိုးအစားပေါ့နှော်၊ ၃ ပုံပုံတစ်ပုံပေါ့နှော် တစ်ပုံလောက်ကတော့ ပယ်ရတာပေါ့။ ၂ ပုံလောက်ကတော့ စိစစ်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။”
အခြေခံလူတန်းစားတွေ အများအပြားရှိရာ ဒေါပုံမြို့နယ် သဘောင်္ကျင်းရပ်ကွက်မှာလည်း ထောက်ပံ့ကြေး ရသင့်လျက်နဲ့ မရတဲ့သူတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဒေါပုံမြို့နယ် သဘောင်္ကျင်းရပ်ကွက် ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့ရဲ့ တွဲဖက်တည်ထောင်သူ ကိုသီဟကတော့ ကပ်ရောဂါကာလမှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ကြုံနေရပေမဲ့ အကူအညီတောင်းဖို့ သတင်းအချက်အလက် မရတာကလည်း လိုအပ်တဲ့သူတွေ မရပဲဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတခုဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“မရတာကတော့ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ အစ်ကိုတို့ တစ်ရပ်ကွက်တည်းတင် အိမ်ထောင်စုက ၁၅၀၀ လောက်ရှိတယ်။ အဲ့မှာ ရတာကမှ ၅၄၀ ပဲရတယ်။ သုံးချိုးတစ်ချိုးပဲရတယ် နှစ်ချိုးက မရဘူးပေါ့။. အဲ့ဒီ ၂ ချိုးမရတဲ့ သူတွေကလည်း ပထမတော့ နည်းနည်း ဆူညံဆူညံတော့ ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲ့လို သွားလျှောက်ရမယ်တို့ ဘာတို့ နောက်ပြီးတော့ အဲ့မှာ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေကအစ အဲ့ဒါကို ရပ်ကွက်ထဲမှာ မကြေညာဘူး။ မကြေညာတော့ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေက လျှောက်ရကောင်းမှန်းမသိကြဘူး။ တိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာက အလုပ်ရှုပ်တယ်။ နောက်တစ်ခုကကျတော့ လူထုက ဘာကိုသွားမြင်လဲဆိုတော့ တိုင်တာက သွားတိုင်ရမယ် ဖောင်တင်မယ် အလုပ်ရှုပ်မယ် ပြီးရင် ဒီလိုကာလကြီးမှာသွားရမှာ ရောဂါတွေကြားထဲက အဲ့ဒီတစ်ချက်ကြောင့်မသွားချင်ဘူး။ နောက်တစ်ခုကကျတော အဲ့ဒါရဲ့ အကျိုးဆက်က သက်ရောက်မှုရှိမရှိဆိုတာမသိရဘူး။ တိုင်တိုင်းရမှာလား၊ သေချာလား၊ တိုင်တိုင်းရမှာ မသေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ လူထုက စိတ်ဝင်စားပေမယ့် မလုပ်တော့တဲ့ အခြေအနေမျိုး အစ်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့နေရတယ်။”
အစိုးရက ထောက်ပံ့တဲ့ အစီအစဉ်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ အားနည်းခဲ့ကြောင်း ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေက အိမ်ထောင်ဦးစီး အမည်စာရင်းတွေနဲ့ ထောက်ပံ့တဲ့ နှုန်းထားတွေကို ရပ်ကွက်ကျေးရွော အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးတွေမှာ အများသိအောင် ထုတ်ပြန်ထားဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဝန်ကြီး ဦးမင်းသူက ပြောပါတယ်။
အစိုးရကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့ ကြုံခဲ့ရပြီးနောက် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ကြုံနေရတဲ့အထဲက အခြေခံလူတန်းစားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသူတွေကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် ဧပြီလနဲ့ ဇွန်လမှာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၅.၄ သန်းအတွက် ကျပ် ၇၂ ဘီလီယံ၊ ဒုတိယအကြိမ် ဇူလိုင်နဲ့ သြဂုတ်လအတွက် အိမ်ထောင်စု ၅.၄ သန်းအတွက် တစ်အိမ်ထောင် ကျပ်၂ သောင်းနှုန်းနဲ့ ၂၁၈ ဘီလီယံကျော်၊ တတိယအကြိမ် စက်တင်ဘာလအတွက် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၅.၇ သန်းခန့်အတွက် ၁၁၃ ဘီလီယံကျော် ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး စတုတ္ထအကြိမ် ထောက်ပံ့တဲ့ အစီအစဉ်မှာတော့ ကပ်ရောဂါကူးစက်မှု အများဆုံး ကြုံနေရတဲ့အတွက် အိမ်ပြင်မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့ ဒေသတွေက အခြေခံလူတန်းစား မိသားစုတစုကို ၄ သောင်းနှုန်းနဲ့ ကျန်ဒေသတွေမှာတော့ မိသားစုတစုကို ၂ သောင်းနှုန်းနဲ့ ခန့်မှန်းခြေ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၆ သန်းကျော်အတွက် ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၁၆၀ ကျော် သုံးစွဲဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ကိုဗဈကပျရောဂါကာလ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲကွုံနရေတဲ့ အခွခေံလူတနျးစားတှကေို အစိုးရက ထောကျပံ့ကွေးပေးတဲ့ အစီအစဉျအပျေါ မကနြေပျမှုတှကေို တိုငျကွားစာပေါငျး ၂ သိနျးကြျော ရှိနတေဲ့အကွောငျး မ အိမျ့သန်တာထှနျးပွောပွမှာပါ။
ကပျရောဂါကာလမှာ အခကျအခဲကွုံနရေတဲ့ ပုံမှနျဝငျငှမေရှိသူ အခွခေံလူတနျးစားတှကေို အစိုးရက ထောကျပံ့နတော အခုဆိုရငျ ၄ ကွိမျ ရှိလာပမေဲ့ မကနြေပျမှုတှေ ပျေါပေါကျနဆေဲဖွဈပွီး တိုငျကွားစာတှလေညျး အခုဆိုရငျ ၂ သိနျးကြျောရှိနပွေီလို့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးရုံး ဝနျကွီး ဦးမငျးသူက Facebook လူမှုကှနျရကျမှာ ပွောဆိုလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
တိုငျကွားစာတှကေ ၁သိနျး ၈ သောငျးကြျောကို စိစဈပွီးစီးပှားပွီး၊ အမြားစုဖွဈတဲ့ ၉၆ ရာခိုငျနှုနျးကြျောကတော့ ရသငျ့လကျြနဲ့ မရတာကွောငျ့ တိုငျကွားသူတှေ ဖွဈကွောငျး တှရှေိ့ရပွီး၊ ရသငျ့သူတှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျထောကျပံ့နိုငျဖို့ ဆောငျရှကျသှားမယျလို့လညျး ရေးသားထားပါတယျ။
ကပျရောဂါ အဆိုးဆုံးကွုံနရေတာကွောငျ့ အိမျပွငျမထှကျရ အမိနျ့ထုတျထားတဲ့ ရနျကုနျတိုငျးထဲက ထောကျပံ့ကွေးရရှိဖို့ လြောကျထားသူ ၃သောငျးလောကျရှိတဲ့ လှိုငျသာယာ အနောကျပိုငျးမွို့နယျမှာတော့ အုပျခြုပျရေး အာဏာပိုငျတှအေပွငျ ရပျမိရပျဖတှေ၊ စတေနာ့ဝနျထမျးတှနေဲ့ အကူအညီ လိုအပျနသေူတှကေို စိစဈနတေယျလို့ လှိုငျသာယာမွို့နယျ အနောကျပိုငျးအုပျခြုပျရေးမှုး ဦးနမေငျးထှနျးက ပွောပါတယျ။
“ပွောရမယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့မွို့နယျတှမှော အဆောငျတှကေ မြားတယျခငျဗြ။ အဆောငျတှကေမြားတော့ အဆောငျတဈဆောငျ တဈခနျးမှာ သူငယျခငျြး ၃ ယောကျလောကျ စုပွီးတော့ ငှားနကွေတာတှရှေိပါတယျ။ သူတို့က တဈယေောကျကို အိမျထောငျစုတဈစုဆိုပွီးတော့ လာလြှောကျတာတှလေညျး တှရေ့ပါတယျ။ ဒါတှကေို ကြှနျတျောတို့ပယျရပါတယျ။ တဈခြို့ဆို ၃ ယောကျပေါငျးပွီး တဈစုဆိုပွီးတော့ လာလြှောကျတာတှလေညျးရှိတတျပါတယျ။ သူတို့တှသေညျ စကျရုံလုပျသားတှေ ဖွဈနတေယျဆိုတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ ပယျရတာပါ။အကုနျလုံးကို ကြှနျတျောတို့ မပေးပါဘူး။ သို့သျော အဆောငျမှာနတေယျ၊ မိသားစုတဈစုတညျးဖွဈတယျ။ တဈယောကျလောကျပဲ ဝငျငှရှေိတယျ။ သူဝငျငှကေို ကနျြတဲ့ ၃ယောကျလောကျက မှီခိုနရေတယျဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောတို့က စိစဈပွီးတော့ ထညျ့သှငျးလြှောကျထားတဲ့အထဲမှာ နောကျတိုးအနနေဲ့စီစဉျဆောငျရှကျပါတယျခငျဗြ။ ပယျတာကတော့ နညျးပါတယျ။ ပွောရမယျဆို အခြိုးအစားပေါ့နှျော၊ ၃ ပုံပုံတဈပုံပေါ့နှျော တဈပုံလောကျကတော့ ပယျရတာပေါ့။ ၂ ပုံလောကျကတော့ စိစဈပွီးဆောငျရှကျပေးပါတယျ။”
အခွခေံလူတနျးစားတှေ အမြားအပွားရှိရာ ဒေါပုံမွို့နယျ သဘောင်္ကငျြးရပျကှကျမှာလညျး ထောကျပံ့ကွေး ရသငျ့လကျြနဲ့ မရတဲ့သူတှေ ရှိနတေယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ ဒေါပုံမွို့နယျ သဘောင်္ကငျြးရပျကှကျ ပရဟိတလူငယျအဖှဲ့ရဲ့ တှဲဖကျတညျထောငျသူ ကိုသီဟကတော့ ကပျရောဂါကာလမှာ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲ ကွုံနရေပမေဲ့ အကူအညီတောငျးဖို့ သတငျးအခကျြအလကျ မရတာကလညျး လိုအပျတဲ့သူတှေ မရပဲဖွဈနရေတဲ့ အကွောငျးရငျးတခုဖွဈနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။
“မရတာကတော့ ရာခိုငျနှုနျးကတော့ အဈကိုတို့ တဈရပျကှကျတညျးတငျ အိမျထောငျစုက ၁၅၀၀ လောကျရှိတယျ။ အဲ့မှာ ရတာကမှ ၅၄၀ ပဲရတယျ။ သုံးခြိုးတဈခြိုးပဲရတယျ နှဈခြိုးက မရဘူးပေါ့။. အဲ့ဒီ ၂ ခြိုးမရတဲ့ သူတှကေလညျး ပထမတော့ နညျးနညျး ဆူညံဆူညံတော့ ဖွဈလိုကျသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ နောကျပိုငျးကတြော့ အဲ့လို သှားလြှောကျရမယျတို့ ဘာတို့ နောကျပွီးတော့ အဲ့မှာ ရပျကြေးအုပျခြုပျရေးမှုးတှကေအစ အဲ့ဒါကို ရပျကှကျထဲမှာ မကွညောဘူး။ မကွညောတော့ ရပျကှကျနပွေညျသူတှကေ လြှောကျရကောငျးမှနျးမသိကွဘူး။ တိုငျရမယျဆိုတဲ့ဟာက အလုပျရှုပျတယျ။ နောကျတဈခုကကတြော့ လူထုက ဘာကိုသှားမွငျလဲဆိုတော့ တိုငျတာက သှားတိုငျရမယျ ဖောငျတငျမယျ အလုပျရှုပျမယျ ပွီးရငျ ဒီလိုကာလကွီးမှာသှားရမှာ ရောဂါတှကွေားထဲက အဲ့ဒီတဈခကျြကွောငျ့မသှားခငျြဘူး။ နောကျတဈခုကကတြော အဲ့ဒါရဲ့ အကြိုးဆကျက သကျရောကျမှုရှိမရှိဆိုတာမသိရဘူး။ တိုငျတိုငျးရမှာလား၊ သခြောလား၊ တိုငျတိုငျးရမှာ မသခြောတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့လို့ လူထုက စိတျဝငျစားပမေယျ့ မလုပျတော့တဲ့ အခွအေနမြေိုး အဈကို့ပတျဝနျးကငျြမှာတော့ အဲ့လိုမြိုးတှတှေနေ့ရေတယျ။”
အစိုးရက ထောကျပံ့တဲ့ အစီအစဉျမှာ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုတှေ အားနညျးခဲ့ကွောငျး ဝဖေနျမှုတှေ ထှကျပျေါနတေဲ့အတှကျ ကူညီထောကျပံ့ပေးခဲ့တဲ့ အိမျထောငျစုတှကေ အိမျထောငျဦးစီး အမညျစာရငျးတှနေဲ့ ထောကျပံ့တဲ့ နှုနျးထားတှကေို ရပျကှကျကြေးရှော အုပျခြုပျရေးမှုးရုံးတှမှော အမြားသိအောငျ ထုတျပွနျထားဖို့ ညှနျကွားထားတယျလို့လညျး ပွညျထောငျစုဝနျကွီးရုံး ဝနျကွီး ဦးမငျးသူက ပွောပါတယျ။
အစိုးရကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါနဲ့ ကွုံခဲ့ရပွီးနောကျ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲ ကွုံနရေတဲ့အထဲက အခွခေံလူတနျးစားအဖွဈ သတျမှတျထားသူတှကေို ပထမအကွိမျအဖွဈ ဧပွီလနဲ့ ဇှနျလမှာ အိမျထောငျစုပေါငျး ၅.၄ သနျးအတှကျ ကပျြ ၇၂ ဘီလီယံ၊ ဒုတိယအကွိမျ ဇူလိုငျနဲ့ သွဂုတျလအတှကျ အိမျထောငျစု ၅.၄ သနျးအတှကျ တဈအိမျထောငျ ကပျြ၂ သောငျးနှုနျးနဲ့ ၂၁၈ ဘီလီယံကြျော၊ တတိယအကွိမျ စကျတငျဘာလအတှကျ အိမျထောငျစုပေါငျး ၅.၇ သနျးခနျ့အတှကျ ၁၁၃ ဘီလီယံကြျော ထောကျပံ့ခဲ့ကွောငျး သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။ အခုနောကျဆုံး စတုတ်ထအကွိမျ ထောကျပံ့တဲ့ အစီအစဉျမှာတော့ ကပျရောဂါကူးစကျမှု အမြားဆုံး ကွုံနရေတဲ့အတှကျ အိမျပွငျမထှကျရ အမိနျ့ထုတျထားတဲ့ ဒသေတှကေ အခွခေံလူတနျးစား မိသားစုတစုကို ၄ သောငျးနှုနျးနဲ့ ကနျြဒသေတှမှောတော့ မိသားစုတစုကို ၂ သောငျးနှုနျးနဲ့ ခနျ့မှနျးခွေ အိမျထောငျစုပေါငျး ၆ သနျးကြျောအတှကျ ကပျြငှေ ဘီလီယံ ၁၆၀ ကြျော သုံးစှဲဖို့ ရညျရှယျထားတယျလို့လညျး သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။
ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ကိုဗစ်ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရသူအရေအတွက် ခန့်မှန်းချက်ထက် ပိုများနိုင်
လူစုလူဝေးမှုရှောင်ဖို့ ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေ ထပ်မံတိုက်တွန်း
မြန်မာကိုဗစ် ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုစုစုပေါင်း ၁၀၃,၁၆၆ ဦး၊ သေဆုံး ၂,၁၇၄ ဦး
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရတာနဲ့ အမြန်ဆုံးအသုံးပြုမယ်လို့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြော
မြန်မာမှာ ကိုဗစ်လူနာများလာတာကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေ
မြန်မာကိုဗစ် ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုစုစုပေါင်း ၁၀၁,၇၃၉ ဦး၊ သေဆုံး ၂၁၅၁ ဦး